Mai Chibwe VekwaZimuto: Kusangana kamwe chete pavhiki
Kune kugarisana mumba kwekuti munongoonana pakupera kwevhiki nokuda kwemabasa kwakasiyana nokugara muchionana zuva nezuva. Zvoonekwa kuti panoita nyaya dzakawanda pakugara kwenyu nokuti magarire enyu haanatsi kuwirirana nemagarire anofanira kuita vakaroorana. Asi nhamo iripo ndeyokuti muri kuzviita kuti mukwanise kuriritira mhuri yenyu. Haisi nyaya yokuti makasarudza kugara magarire awa.
Hino pana Millicent abvunza kuti angaita sei nenyaya yake nokuti murume wake anouya kumba pakupera kwevhiki asi zvinokwanisika kuti mazuva maviri awa anopera murume asina kuvata nomukadzi wake, kusvika adzokera kwaanoshanda ozouyazve vhiki inouya pamwezve poshaikwa kuvatana pakati pavo, asi imwe vhiki anouya ovata naye kakawanda. Zvinorevei?
Apa handina hangu kunyora zvese zvanyogwa mumwadhi iyi asi kuti ndahwisisa kuti munyori uyu mukadzi ava nemakore maviri awanikwa asi vanoshanda kwakasiyana nomurume. Mukadzi anoda chose kuiswa asi pamwe murume haamuisi weekend yese kusvika adzokera kubasa. Asizve pakutaurirana paEmail ndahwisisa nyaya yokuti murume nomukadzi vese havataudzani nyaya dzokuvatana. Zvinongoti pazvaitikira zvoitika pasina zvokutaurirana kuti ngatiisane, kana kuti hendei tinovata. Vese havashandi pa WEEKEND saka vanoonana zvakanaka kwemazuva maviri.
Pamagarire awa ngatihwisise kuti kune vachangoroorana chinhu chakaipa chose kupedza vhiki yese musina kuonana mozoonana moshaya zvokuita nokuda kwekutadza kutanga nyaya. Pamwe murume ari kuhi haadi anenge achitarisirawo kuti mukadzi achataridza kuda kuiswa, iyewo mukadzi achitarisira kuti murume ndiye achatanga nyaya. Kusvika vaparadzana pasina atanga nyaya.
Pakugara wega pane miyedzo yakawanda chose. Vavakidzani chaivo vanokuona uchingobuda hako mumba uchienda kumagirosa kana kuti kubasa. Vanoziva kuti uri wega uye une zhara yezvinhu. Vanotsvaka mazano okutaura newe kuita sokuti vanhu kwavo asi dziri nhubu. Vanhukadzi zvikuru kana ada murume chero murume wemunhu, anokwanisa kumukwezva kusvika umwe musi vangoita sevasangana pasina umwe munhu izvo nyaya yarongwa kare. Hino kana murume uya ari munhu asina simba rokuramba, anokwanisa kuzoerekana ava pamuedzo wakaoma.
Kunemi vakadzi vomumba, onai kuti muri kuchengeta mutemo wekuchengeta murume. Hazviiti kuti iwe hausi kumwedzi, hausi kugwara, murume wouya pakupera kwevhiki, woita mazuva maviri ese unaye pasina zvawamupa, murue opedzisira adzokera kubasa nezhara iwe uripo. Hazvifaniri. Pakadai murume handiye ane dambudziko. Mukadzi ndiye ashaya rairo mumba. Mukadzi wemunhu, chero hedu tikati mazuvano kwava ne EQUALITY, anofanira kuva iye anogamuchira murume, omubikira paWEEKEND ipapa, womuwachira, womuainira, womurongera zvokudya zvokuenda nazvo, womuudza kuti wange uchimushuva vhiki yese. Mapedza kudya usatambisa nguva uchitaura zvisina maturo. Murume haana kuvinga nyaya. Abva kwese kwaabva kuvinga iwe. Dai wange usipo pamwe aisatombouya kumba kwenyu achipedza mari nokubhadhara mabhazi kana kutenga peturu. Chii chausingahwisisi ipapo? Murume aita zvaanofanira kuita. Auya kumba. Iwe chiitawo zvaunofanira kuita Chimubikira, nokumupa mvura yokugeza nokumuvhurira akurhoje kusvika aguta.
Saka chigezai mukasire kuenda kundovata. Chikurudzira murume kuhwisisa kuti wange uchimushuva vhiki yese saka unoda muende kunobvisa chishuvo chako. Kuti zii pa WEEKEND yese kusvika yapera pasina chaitwa kuratidza kuti hauna hanya nomurume. Iyewo kunyarara kusvika adzokera kuhwisisa kuti iwe hauna hanya naye. Usafunga kuti ange asingadi kurhojana newe bodo. Abva kwese uko achitozvifunga achironga kuti zvichamunakira sei. Asi paasvika kumba aona kuti magamuchirire awaita amuratidza kuti hazvimo mumoyo mako nomufungwa dzako. Hausi munhu anohwisisa kuti uri mukadzi wemunhu, kana kuti zvinorevei.
Masvika kuimba yokuvata chitungamirira nyaya iwe muridzi wemurume. Tanga nokukwiza muviri wemurume (MASSAGE) kusvika apfava muviri. Ipapo pakukwiza ndipo paunoita nyaya dzisina maturo idzo kuti nguva iende mberi Uchibatabata murume wako. Kumukwiza nemafuta, kumurezva, kumuudza nyaya dzinofadza. Kana adawo kukukwiza muviri ndezvake asi ukaona ava nezemo chiisanai zvinoratidzawo kuti wange wava nevhiki wakamirira. Chiuno choitawo simba revhiki yese kuratidza kuti wange wakamumirira kwete kungoti rabada uchifunga muriwo une dovi. Isa fungwa pakufadza murume azive kuti ndiwe chikonzero chaafambira kubva kwaabva. Vhiki inouya unoona asvika futi kuvinga iwe mukadzi wake. Zvinoreva kuti ari kuda iwe kwete vamwe vakadzi. Saka iwewo chida murume wako sezvaanokuda iye kana kupfuura. Hatisi kuti haudi murume mumoyo, asi kuti ratidza murume zviri mumoyo mako. Hazviiti kufunga kuti murume aramba kuvata newe iwe usina kuita zvaunotarisigwa kuita.
Mapadza, pakuvata swededa pedo nomurume wovata waka isa ruoko kuseri kwemurume wako wakamuswededza pedo newe modziisana miviri yenyu. Ukapepuka usiku ukawana murume amire chombo, gonyerera murume nokusimudzira gumbo kusvika wawana mukana wekupinza chombo chake muisane futi. Usamirira zvokuti iye ndiye achakuudza kuti anoda kupinza. Kana wakanyorova zvokukwanisa kupinzwa chaunomirira chii? Uyu murume wako. Hapana chauchasvoda paari.
Mangwanani kana zvichiita nonokai kumuka mumboita basa kungorezvana henyu muchiita nyaya kana musina zemo. Kana ane zhara muka undobika tii uuye nayo womupa mozomuka zuva rakwira. Kana mune vana ndipo paungakasira kumuka kufidha vana. Kana musina chii chaunomanyira uchisiya murume mumubhedha. Wana zvokarongwa zvokuita pamwe chete nomurume mumba menyu, kwete kuvhakashira vanhu kana kurega vanhu vachikuvhakashirai panguva yenyu iyi. Kana mada zvokuvhakachigwa chiregai kurega vanhu vachigara nguva refu. Wanai chokuvaudza kuti vaende kudzimba dzavo musare muite zvinoitwa nevakaroorana. Weekend haisi nguva refu.
Hazvinei kuti murume ataridza kuda kukuisa here kana kwete. Uri mukadzi wemunhu kureva kuti ibasa rako kukwezva murume kusvika akurhoja. Kune vamwe vedu vane tsika yokumirira kuti murume achati bvisa bhurugwa. Bodo veduwee. Iwe ndiwe unoemera murume nokumurezva kusvika amira chombo. Kana usingazvigoni bvunza vakuru vakuudze zvokuita asi zviite chete. Musi wamaroorana ndiwo musi wawakabvuma basa irisaka nhasi kuzondinyorera woti murume haakurhoji kana auya paweekend, uri kurevei? Tete vakakuudza kuti kudii pakuchengeta murume? Ukazohwa kuti aonekwa ane hure uchapopotera ani iwe uchiita sokuti hauna hanya naye.
Vanhukadzi tinokangamwa kuti pataiva mukomana nomusikana nevarume vedu, varume vaigarozama kuisa isu tichiti mira tiroorane ugozoita madiro. Hino nhasi aroora mukadzi oti zii nazvo. Ko kuchiyeuchidza murume kuti ngaachitsiva mazuva awaimboramba aya, zvaendepi? Murume ngaagare achihwisisa kuti Chishanu chikasvika ari pabasa kana asvika kumba. Kune vaya varume vanomwa doro, unoona otanga auya kumba ozoti mapedza kuisana ofunga zvokunomwa doro neshamwari dzake. Achidzokako unomutswa futi worhojewa movata henyu hope. Murume anoshanda kure hauna nguva yokumurambira kana kupopotedzana naye. Une nguva yokumufadza chete iyewo achikufadza.
Kuti Svondo isvike murume agorongedza agodzokera usina zvawaita inyaya inoratidza kuti hauna kuraigwa zvakakwana. Murume, chero uya anouya kumba zuva nezuva haafaniri kuti abude mumba kuseni akazara urume iwe uri mupenyu uye usingagwari uye usiri kumwedzi. Hazviiti izvozvo.
Kubva paChina muchitaurirana pafoni, muudze zvakamumirira kumba kuti agare afunga kuti kune basa. Ziva zvokudya zvinodiwa nomurume wako wopota uchimubikira.
Kana moda kuparadzana nguva yake yokudzokera yasvika, woneka murume zvinoratidza kuti haufariri kupedza vhiki yese asipo. Kana ane mota achizvifambira ega, munonotse kudzokera.
Ndizvo zvandataurira nyakubvunza uyu. Isu vanamai vemumba, ngatiratidzewo kuda kuiswa sezviri kuita maSMALL HOUSE amuri kuona mumaraini achivingwa nevarume vevanhu. Vakadzi tese tine zvakangofanana. Musiyano ndewekuti vamwe vedu kana tava mudzimba tinokangamwa kuti murume anobatwa samambo. Zvokuti unotambira mari yakawanda kupfuura yemurume kana kuti wakadzidza kumupfuura kana kuti uri MANAGER kubasa kwako, ndezvokubasa izvo. Kana wava kumba ratidza murume kuti munhu anokosha uye munhu waunoda kuvata naye, uye ndiye mukuru mumba. Uchaonawo iye okupa ukuru hwacho oti ronga ichi neicho, nokuti anohwisisa kuti zvese zvaunoita unoitira iye nemhuri yenyu. Vamwe vedu havana kuhwisisa kuti chitubu chawakatakura icho chine simba pamurume wako rokuratidza rudo, rokupa mufaro, rokukwezva murue, kupfuura mashoko aunokwanisa kutaura kana kupopota nomuromo.
Kana zvese zvomumba zvaitwa tora murume wako undomupa chitubu aite zvaanoda nachoWeekend yese kusvika adzokera. Kumirira murume kuti ati bvisa bhurugwa handizvo. Iwe bvisa wega bhurugwa upe murume chiro chake akuise paadira. Uri mukadzi wemunhu kureva kuti wakavinga kuzoiswa pamusha apa. Dai wange usina chitubu dai usiri mukadzi wake. Ngatiriritire varume vedu nomoyo wese tichivapa zvido zvemiviri nefungwa dzavo.
Tataura nezvemukadzi anosvoda kuita basa rake asi iye achitoda kuti riitwe. Kune vamwe vakadzi vanongoti murume apinda mumba kubva kwaange ari kwevhiki yese, vanomupa chokumwa voti achingopedza vototanga kukisana naye nokumukwezvera kumubhedha kunoisana. Kana muchidanana uye makasununguka pakutaurirana, ndizvo zvamunoita kana pasina anogwara kana kuti ari kumwedzi. Nyaya yabva pamubvunzi asingazviiti izvi, anomirira kuti murume amuti bvisa bhurugwa .
Mukadzi anoshanda kure:
Apa tataura nezvomukadzi ane murume anoshanda kure asi kune mhuri dzine mukadzi anoshanda kure achiuya kumba kupera kwevhiki, murume achishanda pedo nepavanogara achisara nevana kana kuti achingosara ega. Vakadzi hwisisai kuti chero nyaya yenyu ikamira sei, ibasa rako kuona kuti murume achengetwa pane zvese zvinohi kuchengeta murume. Kurhojana kwenyu mumba mdiwe unoronga kuti zvoitwa riini. Ngatirege kureverana nhema dzokuti tese tiri kugona basa iri. Variko vanoritora sokuti harina kukosha asi kana muchipota muchiparadzana hwisisa kuti ukasada basa iri ndiwe uchazochema mberi nyaya yako yakuipira.
Murume ari pasi pemakore 60 anofanira kugarotapudzwa urume uye ndiwe unofanira kuzviita somukadzi wake. Iye ane pokubudisa urume napo iwe une pokugamuchira urume apo. Kusangana kwenyu kuti nyaya yenyu youpenyu ifambe zvakanaka.
Musikana anodanana nomukomana ndiye anomirira kukumbigwa kuti abvise bhurugwa. Kana wava mumba wava mukadzi wemunhu kana uchiziva kuti muchavatana, bhurugwa racho wadii kugara watobvisa nechekare?
Ngatikurudzirane kuchengeta varume vedu nomoyo wese tichizviita murudo, kuda murume uye kuda mhuri dzedu kuti dzienderere mberi pasina kuwanzirana nyaya. Tinohwa kuti vakadzi vanoda SECURITY, and chokwadi ndechokuti tese varume nevakadzi tinoda SECURITY muupenyu. Murume anofanira kugara achiziva kuti akasarudza munhu akakodzera kuita mukadzi wake, kwete kugarotarisa vamwe vakadzi nokufunga kuti dai akaroora mai Nhingi dai ari pari nani pane zvaari newe. Bodo. Hazvigozhi kutaridzana rudo mumba.
Imiwo varume, kazhinji ndimi munokonzeresa mukadzi kungoti zii seasingadi zvinhu iri nyaya yokutya kutaura kuti ngatiite ichi kana icho. Ukasunungura mukadzi wako mese munoita mufaro pamusha wenyu. Hazvirevi kuti anokujairira kana kuti anokushora. Asi kutoti anokuwedzera mufaro nokuti anokwanisa kukurongera. Mukadzi haasi muranda wako. Anotoriwo munhu mukuru ane njere, pamwe dzakatopfuura dzako zvokuti ukada kumuregera achironga anotoronga zvinofadza chose. Vanhukadzi vanopanana mazano emudzimba kupfuura imi varume. Asi chero akaita mazano api zvawo murume wake ari DICTATOR hapana chinobuda pamazano ake.
Varumehwisisai kuti mukadzi ane mufaro mukadzi ane rukudzo futi kumurume wake. Nyaya ye AUTHORITY mumba iyi iri kukubirai mufaro. Mukadzi anoita zvinhu norudo mukadzi anofadzawo murume wake. Sunungurai vakadzi venyu vakwanise kutaura zvinhu zvakawanda pauviri hwenyu. Garobvunzawo mukadzi wako kuti Rhoji yamadeko akaihwawo sei? womukurudzira kutsanangura manakire ayo kwete kungoti yainaka. Itai nyaya pairi, iwewo womuudza nezvechikapa chake kuti chinofadza zvakadii nemhosva yei. Uye unofarira kupurudzira kwaakaita chombo uye kukuregera uchimusveta bhinzi yake.
wanawo nguva nomukadzi wako yaunomutsanangurira maonere aunoita muviri wake uye kuti chinokumisa chombo chaicho chii paari uye pazviito zvake. Mupewo nguva yokupurkitiza sokuti womuti ambozama kumisa chombo nemazano ake ega. Uchatoona kuti anohwisisa chombo chako kupfuura zvaunomufungira.
Pakurhojana kana iye achichemerera iwewo wana zvaunotaurawo kwete kungoti zii. Hino mazvionawo kuti weekend yese inopera pasina ati anoda zvinhu asi ipapo vese vari kutoda. Kutadza kungotaura chete.
Kana zvichikunetsai kutaura tenga kabhera kekuti umwe akakakaridza zvoreva kuti anoda kuti muisane. Pasina izvozvo tumiranai maSMS kuti nyaya iri papi weekend ino.
Posted by Mai E Chibwe at 16:25